गायिका आस्था राउतको विषयमा अनुसन्धान हुँदैछ : प्रहरी - Pokhara News
गायिका आस्था राउतको विषयमा अनुसन्धान हुँदैछ : प्रहरी
२०७६ माघ ३, १७:३७ मा प्रकाशित
पोखरा न्यूज – ०३, माघ । गायिका आस्था राउतले आफूलाई प्रहरीले ‘तँ’ भनेर दुर्व्यवहार गरेको भन्दै बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत एउटा श्रव्यदृष्य सामग्री (भिडियो) हालिन । उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।
सिसी टिभी फुटेजमा महिला प्रहरीले सुुरक्षा जाँचका बेला कुनै दुर्व्यवहार गरेको नदेखिने महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले बताए । राउतले नै अभद्र व्यवहार गरेको फुटेजमा देखिएको भन्दै उनले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।
यस विषयमा महिला प्रहरीले महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा घटनाको विवरणसहित जानकारी गराएकी छन । उक्त विवरणमा ‘सुरक्षाको जाँच गर्न खोज्दा किन गर्नुपर्यो , म गायिका हो, चिन्नु भएन ?’ भनेर गायिका राउतले उल्टै प्रश्न गरेर उल्लेख रहेको कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण बज्राचार्यले बताए । राउतलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने अवस्था देखिएको भन्दै उनले महिला प्रहरीबाट कुनै दुर्व्यवहार नभएको जिकिर गरिन ।
उडिरहेको हेलिकोप्टरले सामान झारेपछि…
चिटिक्कको घर पाएपछि विपन्न समुदाय दङ्ग !
पशुपति क्षेत्रमा कमजोर व्यवस्थापन : फूलमाला चोरिँदै, फोहर थुप्रिँदै
२०७४ मंसिर ११, ०९:३९ मा प्रकाशित
पोखराको सहिद पार्कमा रवीन्द्र अधिकारीको शालिक अनावरण
रवीन्द्र अधिकारीको शालिक बनाउने मुर्तिकार सेन्चुरी सम्मानित
पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले जिल्ला अदालतमा हाले झुठो लान्छना र गालीबेइज्जती मुद्दा
बागलुङका ५ विद्यालयमा नर्सिङ सेवा लागू
पोखरामा जारी प्याराग्लाइडिङ च्याम्पियनसीपमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहन सफल
तनहुँमा २३ वर्षपछि हुन लागेको राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलनका लागि २ सय ३७ कविता प्राप्त
भारतबाट १० दिनमा रेल सेट नेपाल आइपुग्ने! रेल्वे कम्पनीका लागि २ सय २६ कर्मचारी थपिने
गोरखा दरबारको कन्तबिजोग! (तस्बिरमा हेर्नुहोस्)
युएई दुर्घटना मृत्यु भएका ३ नेपालीको पहिचान खुल्यो